Dhagayso:-Al Shabab oo la timid xeelado cusub, iyo dhaqanka oo tageeray -News and information about Somalia
Home Warkii Dhagayso:-Al Shabab oo la timid xeelado cusub, iyo dhaqanka oo tageeray
Dhagayso:-Al Shabab oo la timid xeelado cusub, iyo dhaqanka oo tageeray
Ururka Al Shabaab ayaa wax ka badalay siyaasadooda la xiriirta qaabka ay ula dhaqmaan dadka shacabka, ardayga , ganacsatada, gaar ahaan oday dhaqameedka iyo culumaa’udiinka.
Al Shabab oo horay looga bartay in ay dilaan dadka ka soo horjeesto mabaa’diidooda ayaa hadda bilaabay in ay soo dhaweeystaan shacabka iyaga oo u furayo tababaro isla markaana ku caawinaya dhaqaale kuwooda taagta daran.
Wajiga cusub oo ay la timid kooxda Al Shabaab ayaa u muuqda mid ay doonayaan in helaan qalbiga iyo taageerada shacabka. Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwooda ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa dhibaatooyin badan ku qaba dowlada Fedaraalka kuwaas oo ay ku jiran xadgudubyo iyo ku tagrifalka awooda dowladnimada.
Al Shabaab oo ay ka dhex arka fursad kala fogaanshaha ay kala fogaadeen dowlada Fedaraalka iyo shacabka ayaa dhawaan waxa ay tababaro u fureen odaayaasha dhaqanka ee soo xulay xubnaha Baarlamaanka Fedaraalka. Inta uu socday tababarkaas ayaa odoyaasha dhaqan waxaa la siiyaya tababar lagu sheegay in uu yahay mid diini ah iyo mid lagy barayo mabaa’diida Al Shabaab.
Inta uu tababarku socday ayaa odoyaasha dhaqanka waxaa la siiyay lacago sooryo soo dhawayn iyo sakootinba isugu jirto, dhar ay ku labistaan iyo hadiyado ay u qaadaan dadkii ay ka soo tageen.
Halkaan ka dhagayso odoyaasha dhaqanka oo ka hadlaya waxa ay ka filayeen kooxda Al Shabaab iyo wanaaga ay kala kulmeen.
Previous articleDAAWO SAWIRO:-RW Khayre oo shacab fara badan salaadii ciida kula tukaday Masjidka Isbaheysiga
Next articleUniversal Tv Live
Kulamo aad u xasaasi ah oo caawa kasocda Dhuusamareeb Udhaxeeyo dowlada...
Qof Baasaboor Ajnabi ah wata Somaliland Madax kama noqon doono”sidaasi waxaa...